Ifama yase-Asahalah, iVilla eNtofontofo enePool yaBucala, iB4
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguRashid
I-Asahalah Farm Villas ibonelela ngamava awodwa kwiintsapho kunye nabahlobo abanqwenela ukonwabela ixesha elisemgangathweni ngelixa bekufutshane kakhulu kwezona ndawo zinomtsalane eMuscat. Ifama liziko elibhalisiweyo elihlangabezana nemigangatho yehotele ezi-4. Yimizuzu engama-25 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMuscat kwaye unokufikelela ngokulula eMuscat Expressway. Indawo yokupaka yasimahla kunye nokufikelela kwiWi-Fi kubonelelwa. Ulwamkelo lwethu lusebenza ngama-24/7 kwaye abasebenzi bethu abanamava abakhe bathandabuze ukwenza ukuhlala kwakho kube ngamava akhethekileyo kwaye awulibaleki.
Le holide Villa ulala 8 abantu (Igumbi Master kunye King bed, 1 Amagumbi kunye 2 iibhedi single kunye 4 iibhedi ezitofotofo sofa kumagumbi okuhlala). I-villa inegumbi elikhulu lokuhlala / lokutyela elikhulu (9x7m), kunye nelinye igumbi lokuhlala elibizwa ngokuba yi "Arabic Majlis" (7x4m). Omabini amagumbi okuhlala anombono omangalisayo egadini nasechibini. Kukho amagumbi okuhlambela ama-4 kule villa, amagumbi okuhlambela agcweleyo ama-3 (aneshawa) amagumbi okulala kunye ne-Arab Majlis, kunye negumbi lokuhlambela elongezelelweyo legumbi lokuhlala eliphambili. Inkonzo yokucoca imihla ngemihla, iitawuli kunye nezixhobo zokuhlambela zibonelelwa. Amakhitshi ethu axhotyiswe ngokupheleleyo. Beza ne-microwave, i-oveni, isitovu, umatshini wokuhlamba izitya, iketile, itoaster, iFriji kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko zokupheka nokuphaka. IVilla nayo inegumbi lokuvasa elizinikeleyo elinesomisi kunye netafile yentsimbi. IiTV ezi-2 ezinkulu zesikrini esibanzi (60") ezinenkqubo yesathelayithi esembindini zenziwe zifumaneke kumagumbi okuhlala. 550m2.
Ivilla ineendawo ezingama-300m2 zegadi yabucala kunye nedama lokuqubha elishushu labucala elinecandelo labantwana. Isiqingatha sedama sinomthunzi weplanga ngelixa esinye isiqingatha sibekwe elangeni. Igadi kwakhona ine-BBQ enomthunzi kunye ne-air-blower kunye nendawo yokubeka ngaphandle enomthunzi. Isixokelelwano sokukhanyisa sisebenza ngokugqibeleleyo ebusuku ukunika imekobume yoxolo yasefama.
Umbuki zindwendwe ngu- Rashid
SineReception esebenza ixesha elizeleyo kwaye iindwendwe zinokuqhagamshelana nolwamkelo ngalo naluphi na uncedo nanini na. Asinakuthandabuza ukuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho kuyonwabisa njengoko ubulindele.